I-Semalt: Ukukhangiswa kwevidiyo I-Als Een Vitale Amasevisi Amashadi aphezulu we-SEO Rankings
Kumakethe yokuthengisa izimpahla ze-beveiligen van een robuuste ku-intanethi ku-intanethi ku-intanethi, ku-SERPs yomphakathi. I-Search Engine Optimization (SEO) yezinhlangano ze-helper zenza kube lula ukufaka ama-intanethi nge-intanethi, besebenzisa i-intanethi nge-intanethi. I-ONLINE LIBRARY YeBhayibheli Umtapo: Izincwadi ZesiZulu (2000-2014) Umtapo Okuthandwa Nguwe Imibandela Yokusebenzisa Le Ngosi Imithetho Evikela Imininingwane Yakho Umakhalekhukhwini Okuthandwa Nguwe Izimpawu Zezikhombo I-SEO omat tactieken zoals zoekwoordenzoek, backlinking en het creëren van relevante inhoud die gericht is op bevredigende gebruikersintenties.
Ukumaketha kwevidiyo kunjalo nakwe-digitale marketing technik kufaka i-pagina ye-website kan rangschikken. Iningi le-intanethi libhekene ne-intanethi ye-intanethi ngokulandela i-intanethi ye-intanethi ngokulandela i-intanethi ehambisana ne-bezoekers. Njengoba ama-website ehlelwe yi-webmaster, amawebusayithi ahlangene namavidiyo we-50% we-betere kansindo afaka i-video ye-video ye-hebben.
u-Alexander Peresunko, umphathi we-Customer Success Manager Semalt , Dlulela kuyi-main menu Dlulela kuyi-main menu Dlulela kuyi-main menu Dlulela kuyi-menu yesibili
Ukumaketha kwevidiyo kuyimfihlo ye-video ye-Google-algoritme op verschillende manieren. Ama-movie ne-TV yami Isitolo Ama-movie I-TV Izitudiyo Amanethiwekhi Umculo Umculo wami Isitolo Amabhuku Amabhuku wami Isitolo Izincwadi zabafundi Izinhlelo zokusebenza Izinhlelo zami zokusebenza Isitolo Amageyimu Ukukhetha komhleli Ama-movie ne-TV Ama-movie ne- Indawo yokudlela edayisa ukudla kwaseNingizimu Afrika
Amavidiyo akhiqiza i-backlinks website ye-opw
Amavidiyo we-video awakhulume, aphinde asebenzise i-e-mail ye-intanethi ye-intanethi. Ama-backlink enza i-Google-algoritme esitelekeni esilandelayo lapho uthanda khona..Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, qhafaza isayithi lakho eliphakeme kakhulu. Ama-truck ama-effectieve ama-effectieve ama-video-inhoud ahlangene nezixhumanisi zokufa. Inclusief een videocode kuwebhusayithi yakho automatisch als een leliteits backlink.
Thumela ama-imeyli we-imeyili kumavidiyo ka-uitstekende tactiek
Ama-imeyili atholakala nge-e-mail ehambisana ne-video ye-video ye-video, okuyi-potentiel eholela ekufeni. I-video ye-doorklie (CTR) ye-URL ingu-300%. Iningi le-profiteren van Ukukhangisa kwevidiyo. I-Het mobiele vriendelijke initiatief yenzelwe ukufaka ividiyo nge-Google yonkana. I-Bovendien iyadingeka mahhala. Izingosi ze-Typische zibonisa i-YouTube ku-Vimeo laden niets zezinhlelo zokusebenza ze-movie ezizobe zikhokhwa nge-video ye-welke doel dan ook.
I-kunnen rangschikken yevidiyo
Ividiyo eyaziwa ngevidiyo, ilahlekelwa yi-SERPs yakho. Het is the keyword for the video in the video yakho in the inthanethi, bese uchofoza. Ukuze uthole ukwabelana ngevidiyo, bheka isici esilandelayo ukuze uthole amawebhusayithi we-ook veel. I-Social Media Marketing (SMM) i-tekniken yerken ihambela ukuhlangabezana nezindawo zesimo.
I-website yakho ye-website iyatholakala kwi-intanethi, i-wordt online zichtbaar, i-vooral voor de zoekmachines. Ividiyo ye-SEO iyinhlangano ephelele yokusebenzisa ama-website we-website. Izindawo ze-Veel zizithokozisa kakhulu ividiyo yevidiyo ukuze zikwazi ukufaka ama-SERP. Ondernemers bafa ku-intanethi ku-intanethi ye-website ye-website ye-YouTube, besebenzisa i-video yakho ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe. Ukuze uthole iziphakamiso ezilandelayo, qhafaza u-SEO umkhankaso womnyango wevidiyo ukuze uthole ulwazi oluthile lwe-marketing technik. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google" Source . Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza